Kulan deg deg ah oo laga yeeshay Shaqaaqo ka dhacday deedka Beled-Xaawo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Kulan deg deg ah oo laga yeeshay Shaqaaqo ka dhacday deedka Beled-Xaawo
Kulan deg deg ah oo laga yeeshay Shaqaaqo ka dhacday deedka Beled-Xaawo
Waxaa degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo lulan ku yeeshay, Saraakiisha , Saraakiil xigeenada Ciidamada Gobolka Gedo Maamulka Degmada Baladxaawo, kaas looga hadlayay Amniga xaduudaha iyo Shaqaaqadii ka dhacday duleedka degmada Beled-Xaawa.
Shaqaaqada ayaa waxaa ay u dhaxeeysay Ciidamada dowladda Soomaaliya ay geeysay Gobolka Gedo iyo kuwa Kenya kadib markii Ciidamada Kenya ay dileen Nin Shacab ahaa oo ka baxay degmada Bed-Xaawo kuna wajahnaa Magaalada Mandheera.
Kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen Taliyaha Ciidamada Nisa ee Gobolka Gedo Cabduraxmaan Cabdulahi Aadan Bakaal Kooke Taliyaha qeybta Ciidanka Asluubta Gobolka Gaashanle dhexe Cali Maxamed Cumar, Taliyaha ururka 27aad ee Guutada 10aad ahna ku simaha Taliyaha Guutada10aad Gashanle Xuseen Maxamed Cali Xidig, waxaa looga hadlay sare u qaadida iyo adkaynta amniga yareynta shaqaqooyinka xaduudaha ay ka dhacaya Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo.
Saraaki hoosyada degmada Beled-Xaawo ayaa kulanka waxaa looga dhageystay xaaladda amniga ee degmad Beled-Xaawo iyo degaannada hoosta ee xiga dhanka xaduudka ee Magaalada Mandheera.
Saraakiisha Sar sare ayaa ku amray Ciidamada inay adkeeyaan amniga degmada Beled-Xaawo iyo Xaduudaheeda, isla markaana aysan aqbalin in Shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo inta u dhaxeeyaa Magaalooyinka Beled-Xaawo iyo Mandheera.
Dhowr jeer ayaa Ciidamada dowladda Soomaaliya ay geeysay Gobolka Gedo iyo kuwa Kenya waxaa xaduudka dhanka Beled- Xaawo ku dhexmaray dagaalo koo kooban oo geystay khasaaro kala duwan.
Previous articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo Safiirka Itoobiya kala hadlay Amniga doorashooyinka
Next articlePele oo isbitaal la dhigay